Sare: Noocyada kala duwan ee Trojans iyo Saameyntooda
Frank Abagnale, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegay in tareenka loo abuuray inuu xadido macluumaadka bangiga ee dadka isticmaala internetka. Goobahaasi waxay ku faafaan iimeylka, keyloggers iyo xayeysiiska pop-up. Waxay isticmaashaa malaayiin kombiyuutarada juqraafi ah si ay u fuliyaan diiwaan gelinta, iyo weerarrada lagu bartilmaameedsado xisaabaadka bangiyada iyo sidoo kale xogta macluumaadka gaarka ah. Trojans waxay aruuriyaan macluumaadka, FBI waxay shaaca ka qaadday in ay soo saartay cybercriminal oo u adeegsatay Zeus si ay u qaadato in ka badan $ 20 malyan bangiyada Canada.
Noocyada kala duwan ee Trojans:
Trojans waxaa lagu kala saari karaa qaybo kala duwan iyadoo lagu saleynayo waxqabadka iyo noocyada weerarrada - histilloles fiche de paie.
Trojan gadaashu wuxuu siiyaa kaysiyeyaasha fursad ay ku kantaroolaan qalabkaaga oo ay ku qasbaan tiro badan oo kombuyuutarro ah. Waxay si fudud u sahlaysaa abuuraheeda inuu sameeyo hawlo kala duwan oo uu jecelyahay sida ugu badan, oo ay ku jiraan dirista, bilaabista, tirtirista iyo helitaanka faylasha, dib u habeynta kombuyuutarrada iyo muujinta xogta. Trojans-ka dib ayaa loo adeegsadaa in lagu midoobo kooxaha kombiyuutarada dhibbanaha waxayna abuuri karaan shabakadaha maskaxda ama shabakadaha shabakadaha.
Exploit waa Trojan oo ku jira xog khaas ah iyo calaamado wuxuuna qaadaa faa'iidooyinka u nugul ee gudaha kombuyutarkaaga ama qalabka gacanta
Rootkits waxaa loogu talagalay in lagu qariyo shey gaar ah iyo waxqabadyada mashiinkaaga. Ujeeddadeeda ugu weyni waxay tahay in lagu faafiyo waxyaabo xaasidnimo ah webka adduunka oo dhan oo sii dheereeya wakhtiga ay barnaamijyadu si habboon u qalmaan.
Trojan-DDoS ayaa ka mas'uul ah sameynta dhammaan weerarada DoS (Denial of Service) ee ka dhan ah cinwaanada webka ee la beegsaday. Waxay u dirtaa codsiyo badan oo loo isticmaalo dadka isticmaala waxayna ku dhacdaa tiro badan oo qalabka kombiyuutarada ah.
Waa inaad si joogto ah ula socotaa waxqabadka iyo waxqabadka nidaamkaaga si markaa dabeecad aan caadi ahayn loo tirtiro. Dhamaan qalabkaaga iyo software-kaaga waa in la cusbooneysiiyaa gaar ahaan boogaha ammaankaaga.
7. Feejignaanta Trojan
Isticmaalayaasha waa in loo tababaraa sidii loo xakameyn lahaa hawlaha ka dhiga khatarta caabuqa botaniska iyo weerarrada xun
Trojan SMS wuxuu kuugu kacayaa lacag aadna kuugu soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah lambarkaaga lambarkaaga lambarrada telefoonka caadiga ah maalin kasta.
Jaantuska Trojan waa barnaamijyada si toos ah loogu rakibo nidaamyadaada iyo in aad qorto ereyada muhiimka ah, qaadashada shaashadaha iyo liisaska liiska dhammaan codsiyadaada socdaalka.
Lagu soo jeediyay antivirus, anti-Trojan, iyo qalab lid ku ah qalabka lidka ku ah